Midowga Yurub oo ballan qaad u sameeyay AMISOM * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By Abdirisak M Tuuryare	 On Apr 5, 2019
–Midowga Europe ayaa balanqaaday in uu sii wadi doono taageeradda uu siiyo Howlgalka nabad ilaalinta Midowga Africa ee AMISOM si ay u fuliyaan qorshaha kala guurka amni ee Soomaaliya.
Jorge Pereiro Pinon oo Midowga Europe u qaabilsan nabadda Africa ayaa hadalkan ka sheegay Shir lagu qabtay magaaladda nairobi ee caasimadda Kenya kaasi oo loo hadlay miisaaniyadda Amisom.
“Wadamadda xubnaha ka ah midowga Europe waxay balanqaadeen in ay taageeraan dhaqdhaqaaqa AMISOM Ee 2019 ilaa iyo 2020” ayuu yiri Pinon.
Midowga Europe waa taageeraha ugu weyn ee AMSIOM waxaanaa uu howlgalka ka caawiyay shaqooyinkii uu qabanayay tan iyo Sanadkii 2007
Hadda waxaa la dejiyay miisaaniyadda uu midowga Europe Howlgalka ku bixinayo Sanadkaan.
Puntland Presidency transferring weapons and equipments…
Abdirisak M Tuuryare	 1 day ago 0
Reer Europe waxaa ay sidoo kale bixiyaan mushaarka ciidanka Midowga Africa ee Soomaaliya jooga oo uu ka mid yahay booliiska howlgalka gadaal uga soo biiray.
Pinon ayaa sheegay in taageeradoodu ay muujineeyso iskaashiga adag ee u dhexeeya Midowga Europe iyo Midowga Africa. Waxaa uu hadalkiisa intaasi ku daray in qaybta ugu muhiimsan ee taageeradda sanadkaan ay tahay fulinta qorsha kala guurka amni ee Ciidanka Soomaaliya ee loogu wareejinayo masuuliyada amnigooda.
Diyaarado Dagaal oo duqeeyay Al Shabaab
Qaramada Midoobey oo farriin u dirtay Madaxda Dowladda iyo…
Xog: Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Abgaal oo hub…